စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Pneumatic Actuator > တခုတည်းသော ခေတ္တ Pneumatic Actuator > စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator
စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator
AOX-P ကို ကို စီးရီး စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuaသို့r ရှိ မြင့်သော အရည်အသွေး နှင့် ရှည်လျားသော ဘဝဖြစ်စဥ် သို့ တှေ့ဆုံ အဆိုပါ အခင်အရှင် auသို့mation market.Over အဆိုပါ အနှစ် ကျွန်တော်တို့၏ AOX-P ကို ကို စီးရီး စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuaသို့r ရှိ ဖူး တင်ပို့ တွင် သုတ် တိုင်း တစ်နှစ်, နှင့် ရှိ ဖူး ကျယ်ပြန့် နှင့် အောင်မြင်စွာ အသုံးပြုခံ့ တွင် ရေ ကုသမှု, ရေနံ, လျှပ်စစ် ပါဝါ, ဓါတုဗေဒ နှင့် oအဆိုပါr တွင်dustries.AOX လိမ့်မည် ပုံစံ နှင့် ပြုလုပ် ထုတ်ကုန် ညီညီညွတ်ညွတ် နှင့် contတွင်ue ကျွန်တော်တို့၏ အားထုတ်မှု သို့ ဖန်တီး နောက်ထပ် အဘိုး ဘို့ cusသို့mers.
Surface ကပစ္စည်း: Hard anodized
¢ Solenoid ဆို့ရှင်â
pneumatic rotary actuator သရုပ်ဆောင် AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်တစ်ခုတည်းများအတွက် 1. နွေဦး။
ရှိပြီးသားအဆို့ရှင်များပေါ်တွင် install ထားပြီးဖြစ်သော AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator ယင်းအဆို့ရှင်အဖွင့်များ၏တည်နေရာများညှိနှိုင်းမှုစေနှင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေပြေနဲ့တိကျမှန်ကန်ပိတ်နိုင်၏ဘေးထွက်မျက်နှာပြင်မှာနှစ်ဦးတစ်ဦးတည်းသောကြောင့်ချေပ screw နှစ်ခု။
3. Indicator သည်။
တိုးတက်လာသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အမြင့်ဆုံးသံသရာဘဝအတှကျအပဲ့ထိန်းတစျ-piece အတောင်တော်အမွေးရိုးဆောင်သော 4. Electroless နီကယ်-ချထားတဲ့ blowout ခံနိုင်ရည်။
အဆိုပါ actuator အကြောင်းကို Relevany ဒေတာ
Ayr Volume ကို (L)
အချိန် (စက္ကန့်) (က) Moving
အပူပိုင်းသို့မဟုတ်ချောဆီကို စင်ကြယ်သော Comperssed Air ကို 8bar
90Â°á± 4A °သို့မဟုတ်အပြည့်အဝ လေဖြတ်0Â° ~ 90Â°
ST (စံ) NBR အို-လက်စွပ်-20 +80 မှ
HT(high အပူအအေး)FPM 0-ring-15 to +150
Lt(low အပူအအေး)Silicon 0-ring-40 to +80
ပုံမှန်အလုပ်လုပ်အခြေအနေများအောက်တွင် AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator များအတွက်အကြံပြုဘေးကင်းလုံခြုံမှုအချက် 30-50% ဖြစ်ပါသည်
1. ကျွန်ုပ်တို့သည်စံအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator စက်ရုံမထွက်ခွာမီထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းကိုခံယူပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့3နှစ်နီးပါးမျှဖောက်သည်တိုင်ကြားမှုများရှိသည်။
2. ကျနော်တို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အမျိုးမျိုးသောပြပွဲများတွင်ပါဝင်ရန်။ အဆိုပါ Valve WorldãAchemaãအာရှWaterãPCVEXPOãECWATECHã INDOWATER ခုနှစ်, သင်တို့ရှိသမျှကိုအထံသို့လာနိုင်ပါတယ်။
3. အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့, အချိန်မီအာရုံစိုက်, လျင်မြန်စွာ, ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုအမိန့်တုံ့ပြန်မှု AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator အဘို့အသေးငယ်တဲ့အမိန့်ကိုလက်မခံ, လျင်မြန်စွာ UPS, DHL, TNT မှတဆင့်တင်ပို့နိုင်ပြီးဖောက်သည်လည်းအားဖြင့်တင်ပို့ရန်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည် ပင်လယ်, လေနှင့်အခြားနည်းလမ်းများ။
မေး: ဘယ်လောက်ကြာငါ pneumatic rotary actuator သရုပ်ဆောင် AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်တစ်ခုတည်း၏နမူနာရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သလဲ
Q: မဆိုအသိအမှတ်ပြုသွင်းကုန်၏မပါဘဲ pneumatic rotary actuator သရုပ်ဆောင်သည့် AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်တစ်ခုတည်းအမိန့်ပေးနိုင်သနည်း
မေး: ရသောနိုင်ငံများထံရောင်းချသည်သင်၏ AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator ရှိပါသလဲ
hot Tags:: စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်
သေးငယ်သော တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator
မြင့်သော အရှိန် တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator
ကျစ်လစ်သော တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator
သေးငယ်သော တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator
မြင့်သော အရှိန် တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator
စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator